के तपाईंले अर्को बजार प्लेटफर्म निर्माण वा किन्नु पर्छ? | Martech Zone
बिहीबार, अक्टुबर 16, 2014 बिहीबार, फेब्रुअरी 25, 2021 Douglas Karr
हालसालै मैले लेख लेख्ने कम्पनीहरुलाई लेखें आफ्नै भिडियो होस्ट गर्न होईन। यसमा केहि टेकीहरूबाट त्यहाँ पुशब्याक थियो जुन भिडियो होस्टिंगको इन र आउटहरू बुझ्दछन्। उनीहरूसँग केहि राम्रा पोइन्टहरू थिए, तर भिडियोलाई दर्शक चाहिन्छ, र होस्ट गरिएका प्लेटफर्महरूमध्ये धेरैले त्यो प्रदान गर्दछन्। त्यसैले ब्यान्डविथको लागत, स्क्रीन आकार को जटिलता, र कनेक्टिविटी, श्रोताको उपलब्धता बाहेक मेरो प्राथमिक कारणहरू थिए।
यसको मतलब यो होइन कि कम्पनीहरूले उनीहरूको समाधान निर्माणमा लामो समय लिनु हुँदैन भनेर म विश्वास गर्दिन। भिडियोको मामलामा, उदाहरणका लागि, धेरै ठूला कम्पनीहरूले उनीहरूको भिडियो रणनीति एकीकृत गरेका छन् डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीहरू। उत्तम अर्थ बनाउँदछ!
एक दशक पहिले जब कम्प्युटि power शक्ति अत्यन्त महँगो थियो, ब्यान्डविथ महँगो थियो, र विकास शुरुबाट गर्नुपर्दथ्यो, कम्पनीले यसको मार्केटिंग समाधान निर्माण गर्न प्रयास गर्नु आत्महत्याबाट केही पनि कम हुने थिएन। एक सेवा प्रदायकको रूपमा सफ्टवेयरले हामी मध्ये धेरैले प्रयोग गर्न सक्ने प्लेटफर्महरू विकास गर्न उद्योगमा अरबौं खर्च गर्‍यो - त्यसोभए तपाईं किन त्यस्तो लगानी गर्नुहुन्छ? यसमा कुनै फिर्ती आएन र तपाईं भाग्यमानी हुनुभयो यदि तपाईंले कहिल्यै भूमिबाट यो प्राप्त गर्नुभयो।
आजको लागि छिटो फर्वार्ड, यद्यपि, र कम्प्युटिंग पावर र ब्यान्डविड्थ प्रशस्त छन्। र विकास सुरुबाट गर्न आवश्यक छैन। त्यहाँ शक्तिशाली द्रुत विकास प्लेटफर्महरू, ठूला डाटा डाटाबेस प्लेटफर्महरू, र रिपोर्टि eng इञ्जिनहरू छन् जुन उत्पादनलाई सस्तो र छिटो बनाउँदछ। सस्तोको विशाल संख्या उल्लेख गर्नु हुँदैन एपीआई (अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग ईन्टरफेस) प्रदायक बाहिर मार्केटमा। एक एकल विकासकर्ता क्यान्ड प्रशासकीय ईन्टरफेसको साथ एक प्लेटफर्म वायर गर्न र एक मा जडान गर्न सक्छन् एपीआई केही मिनेटमा।
यी कारणहरूको लागि, हामीले धेरै अवस्थाहरूमा हाम्रो अडान उल्ट्याएका छौं। मँ साझा गर्न मन पराउने उदाहरणहरु को एक जोडी:
सर्कप्रेस - जब म हजारौं सदस्यहरूलाई मेरो न्यूजलेटर प्रकाशित गर्दै थिएँ, म ईमेल प्रदायकमा साइटको लागि विज्ञापन आयमा भन्दा बढी पैसा खर्च गर्दै थिएँ। नतिजाको रूपमा, मैले मेरो साथीसँग इ-मेल मार्केटिंग प्लेटफर्म विकास गर्न काम गरें जुन सीधा WordPress मा एकीकृत भयो। प्रत्येक महिना केही पैसाको लागि, म हजारौं ईमेलहरू पठाउँछु। केहि दिन हामी सबैलाई रोल आउट गर्नेछौं!
SEO डाटा खनिक - Highbridge एक धेरै ठूलो प्रकाशक थियो जससँग आधा मिलियन किवर्डहरू भन्दा माथि थियो जुन भौगोलिक रूपमा, ब्रान्ड, र शीर्षक द्वारा ट्र्याक गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ बाहिर सबै प्रदायकहरू जसले यससँग सम्झौता गर्दछन् इजाजतपत्रका लागि उच्च पाँच अंकमा थिए - र तिनीहरू मध्ये कुनैले पनि तिनीहरूसँग भएको डाटाको भोल्युम ह्यान्डल गर्न सक्दैनन्। साथै, तिनीहरूसँग अद्वितीय साइट संरचना र व्यवसाय मोडेल छ जुन क्यान प्लेटफर्ममा फिट हुँदैन। त्यसोभए, अन्य सफ्टवेयरमा इजाजतपत्रको मूल्यको लागि, हामी एउटा प्लेटफर्म उत्पादन गर्न सक्षम भएका छौं जुन उनीहरूको व्यवसायिक मोडेलका लागि निर्दिष्ट छ। उनीहरूले गर्ने प्रत्येक लगानी इजाजतपत्रमा लगानी हुँदैन उनीहरूले टाढा हिड्नेछन् - यसले तिनीहरूको प्लेटफर्म बढाउँदै जान्छ र यसलाई आन्तरिक रूपमा अझ बढी कुशल बनाउँछ। तिनीहरू बहुमूल्य विश्लेषण र प्रशोधन समय बचत गर्दै हामी तिनीहरूका लागि प्लेटफर्म बनाउँदै छौं।
एजेन्ट सॉस - मेरो मित्र एडम द्वारा पछिल्लो दशकमा विकसित, एजेन्ट सॉस प्लेटफर्म मोड्युलहरूको पूर्ण संग्रह हो - वेबबाट, प्रिन्ट, ईमेल, मोबाइल, खोज, सामाजिक, र भिडियो बाट। आदम ईमेल सेवाहरू प्रयोग गर्थे र उनीहरूको प्रणाली अवरोधमा काम गर्न कठिनाईपूर्ण समय थियो, त्यसैले उनले आफ्नै ठाउँमा निर्माण गरे! उसले आफ्नो प्लेटफर्मलाई धेरै एपीआईहरूसँग शक्ति प्रदान गर्दछ, धेरै किफायती समाधान प्रदान गर्दछ जुन अरू कुनै उद्योगमा सयौं वा हजारौं डलर हुनेछ। एजेन्ट सॉस अब डलर मा पैसा को लागी लाखौं ईमेल र हजारौं पाठ सन्देश पठाउँदछ। आडम आफ्नो ग्राहकहरु लाई सीधा ती बचतहरु लाई पार गर्न को लागी सक्षम छ।
यी केवल केहि उदाहरणहरू छन् जहाँ चरम सीमितताहरूको साथ मानक प्लेटफर्मको इजाजतपत्रको सट्टा, यी समाधानहरू क्लाउडमा निर्माण गरिएका थिए, र कहिलेकाँही धेरै मजबूत एपीआईहरू प्रयोग गर्दछन्। प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस अनुप्रयोग र प्रयोगकर्ताको लागि विशिष्ट अनुकूलित गरिएको थियो, र प्रक्रियाहरू विकसित गरियो कि प्रयोगकर्ताहरूले सबै कुरा गर्न सक्दछन् समयको एक टन बिना डाटा मसाज गर्न वा प्लेटफर्म मुद्दाहरूको वरिपरि काम गरेर।
प्रयास बनाउनलाई कम नबनाउनुहोस्
त्यहाँ अपवाद छन्। केही कारणका लागि, धेरै कम्पनीहरूले आफ्नै निर्माण गर्न रोज्छन् सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली र यो एक दुःस्वप्नमा परिणत हुन्छ। त्यो किनभने तिनीहरू लिने कामको मात्रालाई कम महत्त्व दिन्छन् र ती सुविधाहरूको संख्या जुन ती प्रणालीहरूले वास्तवमै खोज र सामाजिक मिडियाको लागि साइटलाई अनुकूलन गर्न सजिलो बनाउँदछ। तपाइँसँग प्लेटफर्मको मूल्याating्कन गर्न धेरै सावधान हुनु आवश्यक छ जुन तपाइँसँग नहुन सक्छ। उदाहरण को लागी, जब हामी आफ्नै ईमेल सेवा बनाउँदछौं, हामी पहिले नै ईमेल वितरण र वितरण मा विशेषज्ञ थिए ... त्यसैले हामीले ती सबै अतिरिक्त सुविधाहरूलाई विचारमा लियौं।
ती दक्षताहरू हुन् जहाँ बचत कम्पनीहरूका लागि हुन्। तपाईं आफ्नो बजेट विश्लेषण गर्दा तपाईं यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको सबैभन्दा ठूलो इजाजतपत्र लागतहरू कहाँ छन्? ती प्लेटफर्महरूको सीमाहरूको वरिपरि काम गर्न तपाईंलाई कति पैसा लाग्छ? तपाईको कम्पनीले कस्तो प्रकारको लागत बचत र कार्यकुशलता महसुस गर्न सक्छ यदि एक प्लेटफर्म सम्पूर्ण बजार क्षेत्रको सट्टा तपाईको आवश्यकता अनुरुप निर्माण गरिएको हो? यदि तपाईंले विकासको लागि इजाजत पत्रको लागत प्रत्येक वर्ष खर्च गर्नुभयो भने, तपाईंसँग कत्तिको चाँडो मञ्चको समाधानहरू भन्दा कस्टम र उत्तम रहेको प्लेटफर्म हुन सक्छ?
यो समय अरू कसैको समाधान खरीद गर्न जारी राख्नु भएको छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्न सुरू गर्ने समय हो, वा मास्टरपिस बनाउनु हुन्छ जुन तपाईंलाई थाहा छ तपाईं ग्याँसमा पाइला टेक्न सक्नुहुन्छ!
टैग: एजेन्ट सॉसAPIईमेल प्लेटफर्म निर्माण गर्नुहोस्निर्माण वा खरीद गर्नुहोस्एसईओ प्लेटफार्म बनाउनुहोस्विकास को लागतस्वामित्वको लागतविकास लागतएकीकरणस्वामित्व लागत
कारण किन तपाइँको सीईओ सोशल मीडिया मा हुनु पर्छ